प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै काठमाडौँको ट्राफिक जाम हट्न सक्छ, नत्र सकिदैन | newdnn.com
२५,आईतवार ०४:१४ Sangita Rai
काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीको संख्या दिनहुँ हजारौको संख्याले बढिरहेको छ । उही सडक, उही अवस्थामा चिल्ला सवारीको संख्या बढेपछि ट्राफिक प्रहरीको टाउको पनि उत्तिकै दुखाइरहेको छ । तर सम्बन्धित निकायले भने यसमा कुनै चासो देखाएको छैन । कारण, माथिल्लो तह (मन्त्रीपरिषद)बाट नै यसको पहल हुन सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन जति नै चुस्त बनाएपनि प्रधानमन्त्री अर्थात मन्त्रीपरिषदले नै नचाहेसम्म काठमाडौँका जाम हट्न नसक्ने महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख डिआइजी मिङमार लामा बताउँछन । लामाले पैदलयात्रुलाई कारबाही देखि जेब्रा क्रस निर्माणको सम्मको अभियान चलाएपनि समस्या घट्न सकेको छैन । तर अभियानले केही छाप भने छाडेको छ । यस विषयमा उनै लामासंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 ट्राफिक व्यवस्थापन कत्तिको चुस्त बनाउनु भएको छ ?
सक्दो प्रयास सबै गरेका छौँ । अहिले पैदलयात्रु आफ्नै बाटोमा हिडेका छन । जेब्रा क्रसबाट मात्रै बाटो काटिरहेका छन । सवारी चालक पनि पहिलेको भन्दा धेरै नै सजग भएर सवारी चलाउने गरेका छन । यसले केही हदसम्म भएपनि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहयोग गरेको छ ।
 असहयोग हुने तत्वहरु के के छन त ?
पहिलो कुरा हामीसंग सम्बन्धित निकायले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले सडकको सवारी हेर्ने हो । तर सडक फैलाउन सक्दैनौँ । हामीले भएका सवारीलाई सही बाटोमा हिड्नुपर्छ भन्ने हो । उनीहरुको गाडी चलाएर लगि दिन सक्दैनौँ । अनि नयाँ गाडी र पुराना गाडीलाई छुट्टाछुट्टै बाटोमा हिडाउन पनि सक्दैनौँ । सकड साघुँरो तर सवारी थपिरहेका छन । त्यो हाम्रो बसको कुरा भएन । अनि सडकमा खाल्डाखुल्डी, घुमाउरोपन, पर्याप्त रुपमा पूर्वाधारको अभाव छ । अझ भनौँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैले जाम गरेका हुन्छन । यो रोक्ने काम पनि हाम्रो बसमा भएन । त्यसैले सहयोग भन्दा असयोग गर्ने तत्वहरु धेरै छन ।
 समाधान कसरी हुन सक्छ त ?
यसको एउटै उपाय हो । माथिल्लो तहबाटै सोच्नुपर्छ । त्यो भनेको कार्यकारी व्यक्ति अर्थात प्रधानमन्त्री आफैले ‘यो जाम धेरै भयो । कसरी हटाउने भनेर उहाँ आफैले पहल कदमी गर्न सक्नुपर्छ ।’ अनि मात्रै हामी सहयोगी निकायले भूमिका खेल्ने हो । अब हामीले बनाउँदै जाने तर माथिबाट भत्काउदै जाने हो भने त जति गरेपनि केही हुदैन ।
 पैदलयात्रुबाट पहिला २ सय रुपैयाँ जरिबाना लिनुभयो अहिले त्यो निर्णय फिर्ता लिनुभयो । यो पनि माथिकै आदेश हो त ?
त्यस्तो होइन । माथिको आदेशभन्दा पनि हामीले शुरुमा सबैलाई फुटपाथबाट मात्रै पैदलयात्रुले हिड्दा उनीहरु सुरक्षित हुन्छन र दुर्घटना घट्न सक्छ भनेर चेतना फैलाउन खोजेका हौँ । अब सधै जरिबाना गरेर मात्रै भएन । यसलाई कसरी सही रुपमा लिन सकिन्छ भनेर शुरुमा जरिबाना लिएका हौँ । धेरैलाई थाहा भएपछि हामीले जरिवाना फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौँ । माथिको आदेश होइन ।
 नयाँ योजना के छ अब ?
नयाँ भन्दा पनि यसलाई अझ चुस्त व्यवस्थापन गर्ने र अहिलेकै अभियानलाई निरन्तरता दिने हाम्रो सोच छ । त्यसपछि यो काठमाडौँ आउने विभिन्न नाकामा सुरक्षा जाँचलाई कडाई गर्ने सोच छ । यससंगै सडक विभाग, यातायात विभागसंग सहकार्य गरेर जाने योजना बनाएका छौँ ।